KUSVIRA UYE DZIDZISO DZINONYANYA - Mamirioni Macheki
KUFAMBIRA UYE DZVARA DZEMHARA
Inogonesa sarudzo ine ruzivo
Inotendera kuenderera mberi kwebhizinesi
Anodzivisa Kurwa kwemutemo
Inodzivirira kurasikirwa kwemari
Kukurumidza kuwana kumakore echiitiko
Yedu Yokubatana uye yakakodzera kushandira zvikwata Pasi rese ine hunyanzvi hwekunyorwa mu accounting, mutero, hupfumi uye dzidziso yekukoshesa, nekushingaira. Izvo zvakakosha
Isu tinoshanda padhuze nevatengi uye nevapiiridzi kuvandudza chinangwa, chakazvimirira kutevedzera uye nekushingairira kushandira kunoenderana nezvinodiwa nemutengi. Isu tinopa mishumo yakagadzirirwa kumira mucherechedzo wevakuru vemitero, vaongorori, matare, vanoyananisa uye vamwe mapato vanofarira.
Pasi rese, ine nzvimbo inowedzera yekudzora uye zvipingaidzo zvepamutemo nemirairo, mabhizinesi ane chekuita nemabasa ekugadzirisa, ma Merger uye Acquisitions, Kutanga-ups, mapurojekiti makuru, kutenderera, kutumira kunze uye kutumira zvinhu zvese zvinosangana nematambudziko akasiyana siyana uye kutevedza mabara emigwagwa. -miganhu yekufamba kwevashandi, kuiswa kwebhizinesi, kuwedzera uye kunyangwe nekusimudzira uye kupukunyuka. Mamirioni Vagadziri vanopa kutungamira uye kutsigirwa kumakambani ehukuru hwese pakuteerera uye nekushingairira.
Nezve Merger uye Acquisitions uye Corporate Kugadziridza
Ongororo panguva yekubatanidzwa uye kuwanikwa, kushambadzira uye mamwe marudzi ezvekugadziriswazve zviitiko zviitiko zvinowanzo tarisa pane "guru-pikicha" uye kuderedza njodzi dzemari-kazhinji kutarisisa nzvimbo yakakomba yekutevedza yekubuda. Shanduko dzemakambani pasina kutarisisa kwakaringana nezvekupinda mukubuda kunogona kukonzera kudzora kwakanyanya kwevashandi vakakosha uye kubudirira kwekubatanidzwa. Mamirioni Vagadziri vave kubatsira mabhizimusi kufamba-famba nenyaya dzekufambidzana dzakanangana nemabasa emakambani kwemakumi emakore. Kuongorora kwedu kwakakodzera kunosanganisira kuongororwa kwakadzama mamiriro ekunze, kuferefetwa kwesimba uye kutungamira kwezvinodiwa zvekupinda nyika.
Makambani kupoterera pasi rese anowanzoda kufamba pamwe chete kwemazana gumi nemaviri evashandi, vachiburitsa matambudziko akasiyana zvichienderana nehuwandu hwevashandi, mabasa avo uye zvinyorwa, uye nyika dzakabatanidzwa. Tinogona kushanda padhuze newe pazvirongwa zveprojekiti kuti tipe humbowo pakuchengeta kutevedza nharaunda dzekubvakacha nzira dzemirairo. Mukubatana newe, tinogona kuvaka zvirongwa zvezviitiko zvinoenderana nezvako zvekutanga uye zvinangwa, kukubatsira kuti urambe uri pa track uye uzadzise zvinangwa zvako zvepurojekiti.